शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणका लागि आव्हान गर्दै मोहनविक्रम सिंह | Ekhabar Nepal
बिचार फागुन १६ २०७४ ekhabarnepal
मोहनविक्रम सिंह ने.क.पा. (मसाल)को छैठौं भेला हालै सम्पन्न भएको छ । त्यो भेलाको छलफल खालि दुईवटा एजेण्डाहरुमा मात्र सीमित रहेको थियो । प्रथम, हालै सम्पन्न चुनावको समीक्षा । द्वितीय, पार्टी अनुशासनको मूल्यांकन । ती दुवै विषयहरुमा भेलामा विस्तृत रुपले छलफल भयो । भेलाले हामीलाई दुईवटा जिम्मेवारीहरु दिएको छ : प्रथम, शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्ने । द्वितीय, आठौं महाधिवेशन सफल पार्ने । आगामी करिब एक वर्षका बीचमा हामीहरु ती जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ ।
अहिलेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो । विश्व समाजवादी व्यवस्थाको पतन र पहिलेका धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पतन वा उनीहरुले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा लिएको अवस्थामा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण सजिलो छैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम, दक्षिणपन्थी संशोधनवादी सोचाईहरुका विरुद्ध कडा सैद्धान्तिक संघर्ष गर्नुपर्नेछ । त्यसका साथै “वामपन्थी” संर्कीणतावादी सोचाईका विरुद्ध पनि कडा संघर्ष गर्नुपर्नेछ । ती दुवै प्रकारका प्रवृत्तिहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बारम्बार गम्भीर समस्याहरु पैदा गर्दै आएका छन् । हाम्रो देशमा पनि दुवै प्रवृत्तिहरुका विरुद्ध संघर्षको लामो इतिहास छ र त्यस प्रकारको संघर्षका बीचबाट गएर नै हाम्रो पार्टीको विकास हु“दै आएको छ । त्यसकारण ती दुवै प्रकारका प्रवृत्तिहरुका विरुद्ध संघर्ष एउटा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसकारण अहिले पनि हामीले पार्टीमा देखापर्ने ती दुवै प्रकारका प्रवृत्तिहरुका विरुद्ध उच्च प्रकारको शतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माणका लागि त्यो एउटा निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो ।
आज विश्व र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि उपभोक्तावादी सोचाई धेरै नै बढेर गएको छ र त्यो धेरै नै व्यापक भएको छ । त्यसले गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देश, जनता र मेहनतकश जनताभन्दा व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका पक्षमा नै काम गर्ने प्रवृत्तिहरु बढेर गएका छन् । त्यसको परिणामस्वरुप कैयौं कम्युनिष्ट पार्टीहरु वा ठूलो संख्यामा कम्युनिष्टहरु क्रान्तिकारी सिद्धान्त र उद्देश्यहरुबाट विचलित हु“दै गइरहेका छन् । जुन कम्युनिष्ट पार्टी वा कम्युनिष्टहरु अहिलेसम्म त्यस प्रकारको विचलनबाट बचेका छन्, उनीहरुमा पनि त्यस प्रकारको प्रवृत्तिहरु बढ्दै जाने खतरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा क्रान्तिकारी सिद्धान्त र दृष्टिकोणका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण अत्यन्त कष्टदायक कार्य बनेको छ । त्यस प्रकारको उपभोक्तावादी सोचाईहरुको समस्या यो मात्र होइन कि ठूलो संख्यामा कम्युनिष्ट पार्टी वा कम्युनिष्टहरुले क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट पलायन गर्दछन् । त्यसका साथै त्यससित जोडिएको अर्को र झन् महत्वपूर्ण समस्या यो हो कि स्वयं उनीहरुको क्रान्तिकारी चिन्तनमा विचलन भएपछि उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने गरी पार्टीको सम्पूर्ण संरचना वा नीति र कार्यपद्धतिहरुलाई पनि परिवर्तन गर्ने गर्दछन् । संसारका र नेपालका पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको त्यसरी विचलन भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पार्टीभित्र कैयौंपल्ट राजावादी, कांग्रेसपरस्त, दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी वा उग्र“वामपन्थी” भटकावहरु देखापर्ने गरेका छन् । कैयौंपल्ट उनीहरुका त्यस प्रकारका प्रयत्नहरुको परिणाम स्वरुप हाम्रो पार्टीको संगठन, भूमिका वा जनआधारमा गम्भीर प्रकारको क्षति पनि पुग्ने गरेको छ । त्यस प्रकारका भडकावहरुका विरुद्ध सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रुपले संघर्ष गरेर नै हामीहरु आफ्नो पार्टीको अस्तित्व बचाउन सफल भएका छौं । तर गत कालमा हामीले जुन प्रकारको स्थिति वा समस्याहरुको सामना ग¥यौं, ती सबै इतिहासका कुराहरु भइसके र अब हामीहरु त्यस प्रकारका सबै खतराहरुबाट मुक्त भइसक्यौं भन्ने होइन । भविष्यमा नया“ नया“ रुपमा त्यस प्रकारका समस्याहरु पैदा हुन सक्दछन् । त्यस प्रकारको समस्याहरुको कुशलतापूर्वक र दृढतापूर्वक सामना गरेर नै हामीले आफ्नो पार्टीको अस्तित्वलाई बचाउन, क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्न सक्ने छौं ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखापर्ने कमजोरी वा समस्याहरुका कारणले कम्युनिष्ट पार्टीको विकासमा बाधा पुग्नुका साथै देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु र सरकारहरुले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न, समाप्त गर्न वा क्रान्तिकारी दिशाबाट हटाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएका छन् र गर्नेछन् । कैयौं देशहरुमा उनीहरुले बलको प्रयोग गरेर कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई समाप्त गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । जस्तै कि इन्डोनेशिया । तर धेरै जस्तो अवस्थामा उनीहरुले नदेखिने प्रकारले वा छद्म प्रकारले पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई समाप्त पार्ने वा क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट विचलित गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीमा घुसपैठ गर्ने पनि गर्दछन् – पार्टी भित्रका असन्तोष, अन्तरविरोध वा कमजोरीहरुलाई उपयोग गरेर पनि उनीहरुले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, त्यसमा फुट पार्ने प्रयत्न गर्दछन् । सी.आई.ए.ले संसारभरको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त गर्न त्यसरी प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘र’ले पनि त्यसका लागि लगातार प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । वास्तवमा ‘र’ ले नेपालमा सबै राजनीतिक पार्टी, प्रशासन, सेना आदि सबैतिर आफ्नो घुसपैठ गर्ने कार्य गरेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र पनि त्यसले त्यस प्रकारको प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ । तर त्यसले नेपालको कुन कम्युनिष्टभित्र कति घुसपैठ गरेको छ ? हामीलाई थाहा छैन । जे होस्, त्यस प्रकारका सबै सम्भावनाहरुप्रति पनि हामीले उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
पार्टीमा आन्तरिक रुपमा देखापर्ने कमजोरीहरु वा देशी र विदेशी शक्तिहरुका षडयन्त्रकारी भूमिकाबाट शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माणमा बाधा पुग्ने गर्दछ । कैयौं व्यवहारिक समस्याहरुका कारणले पनि शक्तिशाली पार्टीको निर्माणमा बाधा पुग्ने कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । संगठनको विस्तार वा सुदृढीकरणको कार्यमा कार्यकर्ताहरुको कमीले पनि ठूलो बाधा पु¥याउ“छ । केही दशकयताको स्थितिमाथि विचार गर्ने हो भने पनि प्रष्ट हुन्छ, उपभोक्तावादी सोचाईहरुका कारणले पार्टीको काममा टिक्न नसकेर थुप्रै कार्यकर्ताहरुले पलायनको बाटो समातेका छन् । हाम्रा कार्यकर्ताहरुको एउटा ठूलो संख्याले आफ्नो आर्थिक समस्या वा रोजगारीको खोजिमा विदेशमा पलायन गरेका छन् । अरु पनि विभिन्न कारणले हाम्रा कार्यकर्ताहरुको संख्यामा कमी आउने गरेको छ । नया“ पिढीबाट आउने कार्यकर्ताहरुको पनि बढी ध्यान आफ्नो क्यारिएर बनाउने वा विभिन्न पेशाहरुमा लाग्नेतिर नै हुन्छ । त्यस प्रकारका व्यक्तिगत अवसरहरु सत्तामा भएका वा सत्तामा पुग्ने सम्भावना भएका राजनीतिक शक्तिहरुका पक्षमा गएपछि नै प्राप्त हुन्छन् । हाम्रो पार्टीमा अधिकतर अवस्थामा मानिसहरु सिद्धान्त, नीतिबाट प्रेरित भएर नै आउने गर्दछन् र हाम्रो पार्टीमा सामेल भएर व्यक्तिगत लाभहरु प्राप्त हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीमा सामान्यतः, सिद्धान्त र नीतिप्रतिको आस्थाले बाहेक, कमै मानिसहरु सामेल हुन्छन् । यी कारणहरुले पनि हाम्रो पार्टीको संगठनको विस्तारमा धेरै बाधा पुग्ने गर्दछ ।
आर्थिक समस्याले पनि हाम्रो संगठनको देशव्यापी विस्तारमा धेरै बाधा पुग्दछ । पार्टीलाई बाह्य रुपमा सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । पार्टीभित्रका आर्थिक स्रोतहरु अत्यन्त सीमित हुन्छन् र ती झन्पछि झन् कम हु“दै गइरहेका छन् । लेभी, कोटा, प्रतिशत आदि पनि लगातार कम हु“दै गइरहेका छन् । त्यसरी पार्टीमा आम्दानीको स्रोत घट्दै गएको छ भने खर्च पहिलेभन्दा कैयौं गुणा बढेर गएको छ । त्यसले गर्दा पार्टीमा आर्थिक संकटको स्थिति उत्पन्न भएको छ । यो स्पष्ट छ कि कार्यकर्ता र आर्थिक समस्याको असर संगठनको विस्तारमा पर्दछ ।
पार्टी निर्माणको कार्यमा अर्को गम्भीर समस्या अनुशासनको हो । पार्टी अनुशासन नभैकन एकता कायम हुन सक्दैन । त्यसरी पार्टी अनुशासन र एकता कायम हुन सकेन भने पार्टीले राजनीतिक वा संगठनात्मक जिम्मेवारी प्रभावशाली प्रकारले पूरा गर्न सक्दैन । एकातिर पार्टीको कमजोर संगठन, कार्यकर्ताको कमी, आर्थिक समस्या, प्रतिक्रियावादीहरुका चौतर्फी हमला, कैयौं खुफिया सञ्जालको षडयन्त्रकारी भूमिका त्यसमाथि पार्टी भित्रको अनुशासन र एकता नै खलबलियो भने त्यसको परिणाम अत्यन्त घातक हुने कुरा स्पष्ट छ ।
पार्टीको अनुशासनको समस्यालाई जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा नै हल गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ । माक्र्सवादी–लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धतिको आधारभूत सिद्धान्त हो ः जनवादी केन्द्रीयता । पार्टीमा कैयौं मतभेदहरु हुन सक्दछन् । पार्टी सदस्यहरुलाई मतभेदहरु राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यस प्रकारको स्वतन्त्रताको सधैं रक्षा गर्नुपर्दछ । त्यो नै जनवादको सार तत्व पनि हो । त्यस प्रकारको स्वतन्त्रताको रक्षा गरेर नै पार्टीमा अनुशासन र एकता कायम रहन सक्दछ । लेनिनले मतभेद र एकताका बीचमा कसरी सामन्जस्यता कायम गर्ने ? त्यसका लागि छलफलको स्वतन्त्रता र काममा एकताको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छन् ।
पार्टीमा छलफलको स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ । तर कामका दौरानमा एकता हुनुपर्दछ । यी दुवैका बीचमा द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ । कुनै विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा पहिले छलफलको पूरा स्वतन्त्रता हुन्छ । तर एकपल्ट निर्णय भएपछि एकताबद्ध भएर काममा जुट्नु पर्दछ । त्यसो भएन भने, कामको दौरानमा पनि मतभिन्नता र विरोध गर्ने प्रक्रिया चलिरह्यो भने पार्टीले कुनै पनि विषयमा सफलतापूर्वक काम गर्न सक्दैन । त्यसैले एकातिर छलफलको स्वतन्त्रता र अर्कातिर, काममा एकता– ती दुवैका बीचमा सन्तुलन कायम गरेर नै पार्टीमा अनुशासन र एकतालाई कायम राख्न सकिन्छ, जसले पार्टी जीवनमा अत्यन्त ठूलो महत्व राख्दछ । त्यस प्रकारको अनुशासन र एकता भएन भने हामीले कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्य पूरा गर्न सक्दैनौं ।
माथिको संक्षिप्त विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ, एउटा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्यका अगाडि कैयौं गम्भीर प्रकारका समस्याहरु छन् । यो कुरालाई अझै स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा हामीले त्यस प्रकारको कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माणको कार्य अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा गर्नु परिरहेको छ । तै पनि हामीले त्यस प्रकारको प्रतिकूल परिस्थिति वा समस्याको सामना गर्दै क्रान्तिकारी सिद्धान्त र माक्र्सवादी–लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति अनुसार पार्टीको नीति, संगठन वा कार्यप्रणालीलाई कायम राख्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । तर त्यसरी प्रयत्न गर्ने सिलसिलामा हामीले अनुभव गरिरहेका छौं, त्यो कार्य सजिलो छैन । अहिलेको मात्र होइन, दशकौं देखि हामीले त्यस प्रकारको कठिन र प्रतिकूल समस्याहरुको समाधान गर्दै आएका छौं । पार्टीको सम्पूर्ण इतिहास त्यस प्रकारका कठिन समस्या, प्रतिरोध वा तिनीहरुका विरुद्ध संघर्षहरुले भरिएको छ । तर त्यसको साथै हामीले यो पनि स्वीकार नगरिकन रहन सक्दैनौं कि कतिपयपल्ट हाम्रो प्रयत्न वा संघर्षहरु असफल पनि हुने गरेका छन् । यो कुरा बेग्लै हो कि त्यस प्रकारका कैयौं बाधा वा असफलताहरुका कारणले हामीले आफ्ना प्रयत्नहरुबाट पछाडि हट्ने गरेका छैनौं र लगातार तथा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दै आएका छौं । भविष्यमा पनि त्यसरी अगाडि बढ्ने छौं र बढ्न सक्नेछौं भन्ने कुरामा हामीलाई पूरा विश्वास छ ।
हामी अब आठौं महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छौं र यो महाधिवेशन नहु“दासम्म हाम्रो मुख्य ध्यान महाधिवेशनमा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ । तर हामी महाधिवेशनको तयारीमा लागे पनि देशमा उत्पन्न हुने राजनीतिक समस्या वा आन्दोलनबाट अलग हुन सक्दैनौं । महाधिवेशनको तयारीका बीचमा पनि संसदभित्र वा बाहिर सबै जिम्मेवारी वा संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई आवश्यकतानुसार अगाडि बढाउने हाम्रो नीति र प्रयत्न हुनेछ । तैपनि मुख्य ध्यान महाधिवेशनलाई सफल पार्नेतिर नै हुनुपर्दछ । महाधिवेशनको तयारी पनि एक्लै अगाडि बढ्ने कुरा होइन । महाधिवेशनको सिलसिलामा पनि राजनीति, नीति, कार्यक्रम आदि निर्धारित गर्ने, पार्टीभित्र तिनीहरुलाई स्पष्ट पार्ने वा उच्च रुपमा विकसित गर्ने तथा संगठनात्मक अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै जानु पर्दछ । त्यसरी शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण र महाधिवेशनको तयारी एक अर्कास“ग अभिन्न रुपले जोडिएका कार्यहरु हुन् र ती दुवैलाई साथसाथै अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ ।